Ny sekoly vaovao an'i Michael dia lehibe lavitra noho ny sekoly natrehiny tao an-tranony taloha. Tamin'ny voalohany dia nanana olana vitsivitsy i Michael nahita ny efitrano nanaovana ny kilasiny voalohany. Saingy vitany ny nahita ilay efitrano ara-potoana izay efa niandrasan'ny kilasiny vaovao sy ny mpampianatra azy ao an-dakilasy.
Tsy tsikaritr'ilay mpampianatra izany satria tany an-dakilasy ny lamosiny ary mbola nanoratra zavatra teo amin'ny solaitrabe izy. Noraisin'i Michael teny an-tanany ilay taratasy ary novakiny izay voasoratra teo. Tsiky kely no niparitaka nanoloana ny endrik'i Michael. Natsofok'i Michael tao anaty kitapony ilay naoty ary nifantoka tamin'ny kilasy izy.
Miara-misakafo - resipeo vaovao | mihinana
Snuggly sy Yawny Ilay ranomanitra vaovao
Tantara fohy ho an'ny ankizy - soccer